समानान्तर विश्वको खोजी – Nepal Press
अन्तरिक्षमा शक्तिराष्ट्रको होड
समानान्तर विश्वको खोजी
एक दर्जन अन्तरिक्ष यात्री महिलामध्ये को पुग्लिन् चन्द्रमामा ?
२०७७ फागुन ८ गते १०:५६
काठमाडौं । सन् २०१५ मा काठमाडौंका सिनेमा घरमा रिलिज भएको हलिउड फिल्म ‘द मार्सियन’ले घरेलु बक्स अफिसमा ५० लाख ग्रस कमाएको थियो । म्याट ड्यामन स्टारर फिल्मले मंगल ग्रहमा छुटेको एउटा अन्तरिक्ष यात्रीलाई पृथ्वीमा फर्काउन गरिएको संघर्षको कथा भन्छ ।
हलिउडले रातो ग्रहमाथि ३८ वटा साइन्स-फिक्सन फिल्म बनायो । जुन फिल्मको कथ्य भनेकै मान्छेको मंगल ग्रहमा जीवन र समानान्तर विश्वको खोजीको प्रयत्न थियो । यस्तो लाग्छ, विज्ञानमा आधारित यिनै फिल्मले परिकल्पना गरेको स्वैरकल्पनालाई अहिले नासासहित शक्तिशाली राष्ट्रका अन्तरिक्ष नियोगले पछ्याउँदैछन् ।
हलिउडले लेखेको यही पटकथालाई पछ्याउँदै नासाले अभिनेता टम क्रुजलाई लिएर शून्य गुरुत्वाकर्षणमा फिल्म छायांकन गर्ने तयारी समेत गरेको छ । नासाको यो तयारीमा रकेट कम्पनी स्पेस-एक्सका मालिक इलोन मस्क पनि जोडिन आइपुगेका छन् ।
नासाको पर्सिभिअरेन्स रोभरले मंगल सतहमा अवतरण गरेपछिका तस्विरहरु । दोस्रो तस्विर जेजेरो क्रेटरमाथि ल्यान्डिङ गर्दाको । तस्विरहरु : नासा
अन्तरिक्ष पर्यटनमा हातेमालो गर्ने मस्कको चाहनालाई नासाले पनि साथ दिएको छ । मस्क तिनै धनाढ्य हुन् जो मंगल ग्रहमा उपनिवेशको सपना देख्छन् र मानव सभ्यतालाई स्थापित गर्ने महत्वाकाङ्क्षा पनि ।
सन् २०२१ को फेब्रुअरी महिनामा मंगल ग्रहमा ‘ट्राफिक जाम’ भयो । मंगलमा जीवनको खोजी गर्ने र अन्तरिक्ष शक्ति बन्ने होडमा तीन राष्ट्रले प्रक्षेपण गरेका यान एक साताको अन्तरमा मंगलमा प्रवेश गरे । नासा र युरोपेली युनियनको संयुक्त मिसनले प्रक्षेपण गरेको पर्सिभिअरेन्स स्पेसक्राफ्ट शुक्रबार बिहान मंगलको जेजेरो क्रेटरमा अवतरण गर्‍यो ।
गतसाता रातो ग्रहमा पुगेका चीनको तियानवेन-१ र संयुक्त अरब एमिरेट्सको होप स्पेसक्राफ्ट अहिले कक्षमा रहेर मंगललाई परिक्रमा गरिरहेका छन् । चीनको तियानवेन–१ ले आगामी मे वा जून महिनामा सतहमा अवतरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म मंगल ग्रहमा १४ वटा मिसनले अवतरणको प्रयास गरेका छन् तर, आठ प्रयास विफल भएका छन् । ती सबै अमेरिकी अभियान हुन् । सन् १९९९ र २०२१ मा मात्र अमेरिकी प्रयास सफल भएको छ ।
नासाको मिसन कस्तो छ ?
३.५ विलियन वर्ष अगाडि पानीको ठूलो ताल भएको अनुमान गरिएको क्रेटरमै नासाले यान उतारेको हो । उक्त थलोमा कुनैबेला जीव हुनसक्ने अनुमान वैज्ञानिकले गरेका छन् । सन् १९७० को दशकको भाइकिङ मिसनपछि मंगल ग्रहमा जीवनको सम्भावनाको अध्ययन गर्ने नासाको सबैभन्दा महत्वाकाङ्क्षी परियोजना हो ।
नासाको पर्सिभिअरेन्स रोभर ल्यान्ड गरेको जेजेरो क्रेटरको क्षेत्र । त्यहाँ ३.५ बिलियन वर्ष अगाडि ठूलो पानीको ताल रहेको र जीवावशेष हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तल्लो तस्विरमा रोभरले ल्यान्ड गरेको सुरक्षित हरियो थलो । रातो रङमा पहाड र ठूलो चट्टानसहितको जोखिम क्षेत्र ।
कार जत्रो आकार रहेको अन्तरिक्ष यानमा जीवावशेष अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक उपकरण राखिएको छ । ६ वटा पांग्रा भएको उक्त रोभर सात महिनाको यात्रामा ४७ करोड किलोमिटर यात्रा तय गर्दै मंगल ग्रह नजिक पुगेको हो । उक्त क्रेटरमा नासाको यानले विगतमा जीवनको अस्तित्व रहेको बारे अध्ययन गर्नेछ ।
रोभरले चट्टानमा प्वाल पार्दै टुक्रा संकलन गर्नेछ । केही समय पछाडि प्रक्षेपण गरिएको अर्को रोभरले उक्त नमूनालाई कक्षमार्फत पृथ्वीमा ल्याउने बताइएको छ । यो प्रयत्नका लागि नासाले युरोपेली स्पेस एजेन्सीसँग सहकार्य गरेको छ । पर्सिभिअरेन्समा राखिएको एन्जेन्युइटी नामक हेलिकोप्टरले मंगलमा उडान समेत भर्नेछ । आगामी ३० दिनमा उक्त हेलिकोप्टरले पाँचवटा उडान भर्ने र मंगल सतहको उच्च गुणस्तरको तस्विर उपलब्ध गराउनेछ । एउटा ग्रहमा बसेर अर्कोमा उडान भर्ने यो पहिलो फ्लाइट हो ।
६ वटा पांग्रा भएको उक्त रोभर सात महिनाको यात्रामा ४७ करोड किलोमिटर यात्रा तय गर्दै मंगल ग्रहमा यसरी ल्यान्ड गरेको छ । यो क्रेटरमा नासाको यानले विगतमा जीवनको अस्तित्व रहेको बारे अध्ययन गर्नेछ ।
यस्तो छ जेजेरो क्रेटर । कार्बोनेट र घेराभित्र कुनैबेला जीवनको अस्तित्व भएको अनुमान गरिएको छ । सोही थलोमा रोभरले माटो, चट्टान, खनिज र पानीको अध्ययन गर्नेछ ।
नासाका अनुसार पर्सिभिअरेन्स मिसनको मुख्य उद्देश्य मंगलको जैविकताको अध्ययन गर्नु हो । उक्त ग्रहको भूगर्भ, विगतको वातावरण र चट्टानको नमूना संकलन गर्दै मानवीय जीवनको सम्भावित अध्ययन गर्नु यसकाे उद्देश्य रहेको नासाले उल्लेख गरेको छ । नासाले सन् २०२० मा पर्सिभिअरेन्सलाई चन्द्रमादेखि मंगलसम्मको मिसनको रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
युएईको होप अभियान
संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि अन्तरिक्ष महाशक्ति बन्ने होडमा छ । यो खाडी मुलुकले चीनको भन्दा एकदिन अगाडि आफ्नो होप रोभरलाई मंगलको कक्षमा प्रवेश गरायो ।
युएईको यो मिसनले कक्षमा रहेर किन मंगल ग्रहले वातावरण गुमायो भन्ने सबैभन्दा बढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर खोजी गर्नेछ । मंगलको वातावरण गुम्दा कसरी पानी र जीवन सतहमा गायब भए भन्ने तथ्यसहितले जलवायु अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।
युएईको होभ प्रभ यान मंगलको कक्षमा । यो यानले मंगलको कक्षमा रहेर दैनिक जलवायु अपडेट र परिवर्तनबारे तथ्यांक संकलन गर्नेछ ।
मंगल विजयसँगै युएई विश्वकै पाँचौं अन्तरिक्ष महाशक्ति बनेको मोहम्मद बिन रसिद सेन्टरले उल्लेख गरेको छ । होप रोभर अहिले मंगलको सतहभन्दा १ हजार किलोमिटर माथि रहेर ग्रहलाई फन्को मारिरहेको छ । यो यानले संकलन गर्ने १ हजार जीबी क्षमताको डेटालाई अध्ययनका लागि २०० भन्दा बढी प्राज्ञिक र वैज्ञानिक संस्थालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
युएईको यानले चार प्रश्नको खोजी गर्नेछ । ती प्रश्नहरु हुन् : के मंगल ग्रहमा यसअघि जीवन थियो ? मंगल ग्रहको जलवायु इतिहास कस्तो छ ? मंगल ग्रहको वास्तविकता कस्तो थियो र कसरी विकास भयो ? के मानिसका लागि मंगल ग्रह अर्को गन्तव्य हुनसक्छ ?
युएईको होप प्राेभ यानले मंगलको वातावरणमा प्रवेश गर्नु अगाडि पृथ्वीमा पठाएको तस्विर । मंगलको वातावरण गुम्दा कसरी पानी र जीवन सतहमा गायब भए भन्ने तथ्यसहितले जलवायु अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।
मंगल ग्रहलाई उपनिवेश गराउनुअघि रातो ग्रह कसरी मान्छेको अस्तित्व अनुकूल थियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । चन्द्रमा र अन्य ग्रहको खोजी छाडेर मंगल ग्रहमा अन्तरिक्षको होड गर्नु पछाडि पृथ्वीसँग उक्त ग्रहको समान वातावरण हुनु प्रमुख हो । होप प्रोभ यानका डेटा संकलनकर्ता म्यारम युसुफका अनुसार मिसनको मुख्य उद्देश्य भनेको मंगल ग्रहको दैनिक वातावरणको तथ्य संकलन गर्नु हो ।
यो अध्ययनले अन्य ग्रहको जलवायु अध्ययनको लागि पनि मद्दत मिल्ने अपेक्षा छ । अक्सिजन, हाइड्रोजनजस्ता ऊर्जाका अणु कसरी वातावरणमा फैलन्छन् र भाग्छन् भन्ने तथ्य पेश गर्नेछ । यसले पृथ्वीको भविष्यबारे पनि बुझ्न मद्दत मिल्न सक्छ ।
२०२० मा नासाको क्यूअरसिटी रोभरले पठाएको मंगलको सतहको तस्विर जहाँ सेताम्मे हिउँ देखिन्छ ।
गत वर्ष आयोजित एक छलफल सत्रमा नासा र युएईका इन्जिनियरबीच भएको संवाद रोचक छ । नासाका मुख्य वैज्ञानिक जेम्स ग्रीनका अनुसार अहिले पनि मंगलको सतहमुनि जमेका हिमनदी र बरफ छन् ।
‘कुनैबेला मंगल पनि पृथ्वीजस्तै नीलो थियो । हुनसक्छ १३ प्रतिशतले त्यहाँको पानी नष्ट भयो’ ग्रीन भन्छन्, ‘उक्त ग्रह अध्ययन गर्नको लागि यो अचम्मको स्रोत हो ।’ उनका अनुसार समर याममा देखिने घाँस र मेथन ग्याँसको प्रवाहले त्यहाँ जीवन छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
नासाको क्यूरिओसिटी रोभरले यसअघि पनि मंगलमा अक्सिजन छ भन्ने तथ्य अगाडि ल्याइसकेको छ । ‘यसले के पनि प्रमाणित गर्छ भने समर याममा जीवन मंगलको सतह मुनि छ’ ग्रीन भन्छन्, ‘माटो तातेपछि मिथेन ग्याँस बाहिर निस्कन थाल्छ । हामी मंगलमा पनि जैविकता छ भनेर परिस्थितिको गहिरो अवलोकन गरिरहेका छौं ।’
चीनको तियानवेन-१ अभियान
चीनको मंगल यान तियानवेन–१ ले अहिले मंगल ग्रहको कक्षमा फन्को मारिरहेको छ र सतहमा अवतरणका लागि उपकरणलाई जाँच गरिरहेको छ । यसै वर्षको अन्त्यमा यो यानले सतहमा ल्यान्ड गर्ने चिनियाँ स्पेस एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ ।
पाँच टन तौलको चिनियाँ यानसँग अर्बिटर, ल्यान्डर र रोभर संलग्न छन् । मे तथा जून महिनामा यसले ल्यान्ड गर्न सक्ने जनाइएको छ । ९२ मार्सियन डेज (पृथ्वीको ९५ दिन) मंगल सतहमा रहेर यसले खनिज, हिउँ र पानीको अध्ययन गर्नेछ ।
चीनको तियानवेन-१ रोभर । पाँच टन तौलको चिनियाँ यानसँग अर्बिटर, ल्यान्डर र रोभर संलग्न छन् । मे तथा जुन महिनामा यसले ल्यान्ड गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
नेसनल स्पेस साइन्स सेन्टरका सहायक निर्देशक झोउ योङलायोका अनुसार चिनियाँ यानले मंगलको चुम्बकीय गुण र मंगलदेखि पृथ्वीसम्मको रेडियो कम्युनिकेसन प्रणालीबारे पनि थप अध्ययन गर्नेछ ।
चिनियाँ यानको अर्बिटरमा जडान गरिएको राडारले चाहिं पानी र हिउँको उत्खननसहित अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । तियानवेनले मंगलको ध्रुवसहितका केही खास क्षेत्रमा पुगेर पानीको खोजी गर्नेछ । मंगलको सबैभन्दा ठूलो समथर भूमि युटोपिया प्लानिसियामा चिनियाँ रोभरले अवतरण गर्ने भएको छ ।
मंगलको कक्षमा प्रवेश गरेपछि चीनको तियानवेन–१ रोभरले पठाएको आकर्षक मंगल तस्विर । चिनियाँ यानको अर्बिटरमा जडान गरिएको राडारले चाहिं पानी र हिउँको उत्खननसहित अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।
हरेक मंगल मिसनमा ल्यान्ड हुनुअघिको सात मिनेटलाई सर्वाधिक जटिल मानिन्छ । वैज्ञानिकहरु यसलाई ‘टेरर अफ सेभेन मिनेट’ भन्छन् । नासाको पर्सिभिअरेन्स रोभर अवतरणमा पनि यो एउटा ठूलो डर थियो । यस्तो डर अब चिनियाँ यान तियानवेन–१ तिर सोझिएको छ । मंगलको पातलो वातावरणमा यान अलग हुँदा उच्च तापक्रमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मंगलको वातावरणको अनिश्चितताको कारण पनि अवतरण गर्ने क्रममा भयंकर अनिश्चितता र खतरा हुन्छ ।
चिनियाँ यानले ल्यान्ड गर्नुअघि आफ्नो गतिलाई प्रतिसेकेन्ड १ सय मिटरमा सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा ८० देखि १०० सेकेन्ड लाग्न सक्छ । मंगलको सतहभन्दा सय मिटर (३२८ फिट)भन्दा माथि यान पुग्दाको स्थितिलाई होभर चरण भनिन्छ ।
यो सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षण हो । चिनियाँ स्पेस एजेन्सीका अनुसार उसको यानका लागि अवतरण समय भनेको ९ मिनेट हो । जुन क्षणमा ११ हजार मिटर प्रतिघण्टामा उडिरहेको यानले आफूलाई ढिलो तुल्याउनुपर्छ ।
चीनका इन्जिनियर के कुरामा विश्वास गर्छन् भने उनीहरु ‘सात मिनेटको आतङ्क’ भनिने एउटा कुख्यात अवस्थालाई सामना गर्न सक्षम छन् । मंगलको वायुमण्डलबाट त्यसको सतहसम्म पुग्न कुनै पनि अन्तरिक्ष यानलाई लाग्ने समयलाई सात मिनेटको आतंकको रुपमा चिनिन्छ । चिनियाँ वैज्ञानिक यो यान मंगल ग्रहमा कम्तीमा ९० दिन रहोस् भन्ने चाहन्छन् । मंगल ग्रहमा २४ घन्टा ३९ मिनेटको एकदिन हुन्छ । तियानवेन–१ ले मंगलमा खिचेको तस्विर पृथ्वीमा पठाइसकेको छ ।
अब चन्द्रमामा मान्छे पठाइने
नासाले सन् २०२४ मा चन्द्रमामा मान्छे पठाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि २८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने उल्लेख छ । यो मिसन अन्तर्गत चन्द्रमाको सतहमा महिलालाई ओराल्ने योजना समावेश छ । आर्टिमस नाम दिइएको त्यो अन्तरिक्ष कार्यक्रममा पाँच दशकपछि एक महिला र एक पुरुषलाई समावेश गरिंदैछ । अन्तरिक्ष यात्रीहरु ओरिअन नाम दिइएको अपोलोजस्तै यात्रुवाहक यानमा चन्द्रमामा पुग्नेछन् ।
नासाले सन् २०२४ मा चन्द्रमामा यिनै अन्तरिक्ष यात्रीबाट एक पुरुष र एक महिलालाई चन्द्रमामा पठाउने तयारी गरेको छ । अन्तरिक्ष यात्रीहरु ओरिअन नाम दिइएको अपोलोजस्तै यात्रुवाहक यानमा चन्द्रमामा पुग्नेछन् ।
एसएलएल नामक शक्तिशाली रकेटले उक्त यानलाई प्रक्षेपण गर्नेछ । नासाका प्रशासक जिम ब्रिडेन्सटिनका अनुसार उक्त २८ अर्ब डलरले आर्टिमस कार्यक्रमको चारवर्षको खर्च समेट्छ । जसमा रकेट, क्याप्सुल, मानव अवतरण प्रणाली र अन्तरिक्ष यात्रीले लगाउने परिधानको खर्च जोडिन्छ । ३.२ अर्ब डलर सन् २०२१ को मानव अवतरण प्रणालीका लागि भएको र यो रकमको ठूलो रणनीतिक महत्व छ ।
नासाका प्रशासक ब्रिडेस्टिनका अनुसार राम्रोसँग अन्तरिक्ष उडानको अनुभव भएकी र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा बसिसकेकी व्यक्तिलाई चन्द्रमामा पठाइनेछ । अन्तर्वार्ता लिइएका १२ महिला मध्येबाट उनलाई छनौट गरिने भएको छ । चन्द्रमामा जाने अन्तरिक्षयात्रीको चयन प्रक्षेपण हुनुभन्दा कम्तीमा दुईवर्ष अघि हुने बताइएको छ ।
चीनको चेन्ज–५ मिसन अन्तर्गत गत डिसेम्बर १७ मा चन्द्रमाबाट चट्टान र माटो लिएको यान पृथ्वीमा फर्किएपछि ।
चन्द्रमामा मानिस पठाएर ह्वाइट हाउसले अन्तरिक्षमा आफ्नो देशको अग्रता नवीकरण गर्न चाहेको छ । अमेरिकाले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवबाट हिउँ खोज्ने योजना बनाएको छ । त्यो भेटियो भने चन्द्रमामै रकेटलाई चाहिने इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
चीनले अहिले यस्तो अन्तरिक्ष यान विकास गरिरहेको छ जसमा चिनियाँ अन्तरिक्ष यात्रीहरु चन्द्रमाजस्तो भित्री अन्तरिक्ष गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् । चीनको लक्ष्य सन् २०२४ भित्रै त छैन तर, दशकको अन्त्यसम्म उसले त्यस्तो लक्ष्य बनाउन सक्ने ठानिएको छ ।
नासाको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा मानवरहित एउटा परीक्षण उडान सन् २०२१ को शरद याममा हुनेछ । आर्टिमस-१ नाम दिइएको उक्त यान चन्द्रमाको फेरो लगाएर फर्किनेछ । आर्टिमस-२ ले भने चन्द्रमाको परिक्रमा गर्ने त्यस्तै उडान तर यात्रुसहित गर्नेछ । यस मिसनमा थपिएको नयाँ सुविधामा रकेटबाट ओरिअन छुट्टिएपछि चन्द्रमामा अवतरण र उडानका लागि यात्रुले अन्तरिक्ष यानलाई आफै नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन् । सन् १९६० र ७० को दशकमा अपोलो कार्यक्रमका लागि अहिलेको मुद्रास्फीति सँग समायोजन गर्दा २५० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम खर्चिएको थियो ।
भारत दोस्रोपटक चन्द्रमामा पुग्ने प्रयासमा
पहिलो चन्द्रमा मिसन असफल भएपछि इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन (इस्रो)ले वर्ष २०२१ मा दोस्रोपटक चन्द्रमाका लागि प्रयास गर्दैछ । यसका लागि भारतले चन्द्रयान २ त्यसतर्फ पठाउँदैछ । यसअघि भारतले प्रक्षेपण गरेको विक्रम यान सम्पर्कविहीन भएको थियो । रुसी स्पेस एजेन्सीले लुना २५ यान अक्टोबरमा चन्द्रमामा पठाउँदैछ । यो रुसी यानले चन्द्रमामा प्राकृतिक खनिज पदार्थको खोजी गर्नेछ ।
केही निजी कम्पनीले पनि २०२१मा चन्द्रमामा यान पठाउने तयारी गरेका छन् । जर्मनीको पिटि साइन्टिस्ट, अमेरिकाको स्पेस-एक्स र अर्को अमेरिकन कम्पनी रकेट ल्याब त्यसतर्फ पठाउने तयारी गर्दैछन् । अमेरिकी निजी कम्पनी एस्ट्रोबेटिक टेक्नोलोजीले पनि जुलाइमा सातवटा रोभरसहितको यान चन्द्रमामा पठाउँदैछ ।
चन्द्रमाको कक्षमा फन्को मारिरहेको भारतीय अर्बिटर । यसले अहिले पनि चन्द्रमाको मौसमबारे भारतीय स्पेस एजेन्सीलाई तथ्यांक जानकारी दिइरहेको छ ।
यसै वर्षको अन्त्यमा हब्बल टेलिस्कोपभन्दा शक्तिशाली जेम्स वेभ स्पेस टेलिस्कोप अन्तरिक्षमा पठाइँदैछ । वर्षको अन्त्यतिर फे्रन्च गुएनाबाट पठाइने टेलिस्कोपले सन् २०३० देखि काम गर्न थाल्ने अपेक्षा छ । यो टेलिस्कोपले हब्बलाई प्रतिस्थापित गर्ने भनिएको छ ।
६.५ लामो टेलिस्कोपले सौर्य मण्डलका पदार्थ, सौर्य मण्डलको दूरी र ब्रम्हाण्डको विकासमा मानवीय योगदानको अध्ययन गर्नेछ । यो टेलिस्कोप हब्बलजस्तो पृथ्वीको कक्षमा हुने छैन । यो टेलिस्कोपलाई सूर्य र पृथ्वीको कक्षमा राख्ने तयारी भैरहेको छ जहाँ सूर्य र पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले सन्तुलन मिलाउन सक्छ ।
नासाले जुलाइमा ग्रहको प्रतिरक्षा परीक्षण योजना अन्तर्गत क्षुद्रग्रहको दिशालाई परिवर्तन गर्न अभ्यास गर्नेछ । यसले अन्तरिक्षमा क्षुद्रग्रहको दिशा परिवर्तन गर्न र पृथ्वीमा क्षति रोक्न मद्दत गर्नेछ । यसको लक्ष्य चाहिं चन्द्रमाभन्दा ११ मिलियन किलोमिटर पर रहेको ६५८०३ डिडिमस नामक क्षुद्रग्रहलाई रोक्नु हो जसले दिशा परिवर्तन गरेर यात्रा गर्छ । चीनले चिनियाँ अन्तरिक्ष केन्द्र निर्माणको थालनी गर्दैछ ।
फोटो फिचर : मंगल ग्रहमा ३,००० दिन बिताएको रोबोटले के खिच्यो ?
विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुको ध्यान अब स्पेस प्रतिस्पर्धामा हुनेछ । जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि उसको मुख्य चुनौती चीनसँग हुनेछ जसले अमेरिकालाई व्यापार, प्रविधि र अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धामा चुनौती दिइरहेको छ ।
मंगल ग्रह होस् या चन्द्रमा मिसनमा चीनले अमेरिकी नियोग नासालाई चुनौती दिने गरी अन्तरिक्ष कार्यक्रम लन्च गरिरहेको छ । यसको एउटा उदाहरण अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनलाई चुनौती दिने गरी चीन आफूले निर्माण गर्न लागेको चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र हुनेछ । सन् २०२१ अन्तरिक्ष र बाह्य संसारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्तिराष्ट्रको एउटा प्रस्थानविन्दु हुने कुरामा दुईमत छैन ।
प्रकाशित: २०७७ फागुन ८ गते १०:५६